TOP PACE - FULL FULL, ụbọchị zuru oke na Tannenalm.at na 4K.
Home dị iche iche Aerobatik TOP PACE - FULL FULL, ụbọchị zuru oke na Tannenalm.at
Video gara aga DMAX ihe nlere anya na-eme ọgbọ ọzọ
Video nke ozo PowerBox Pioneer iGyro Sat, uru, uru, arụmọrụ abụọ BEC na LiFePo akụkụ 1
[Mkpokọta: 145 Nkezi: 5/ 5]
Glider ụdị na njedebe zuru oke! N'iji ihe karịrị 300 - 400 km / h hliders a dị elu, nke ndị ọkachamara na-achịkwa, na-agbaso usoro na-esote - mgbatị zuru ezu. 10 nkeji nke dị ọcha video edinam na ị gaghị echefu, m kwere nkwa, nza nke fun
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri a nke ụdị dị iche iche, nke ejiri CFRP mee, nwere nku nku nke 2,50 m ruo 4,90 m ma tụọ n'etiti 4,5 ruo 12 n'arọ. Ha na-efe ọtụtụ ọsọ site na nwayọ ruo oke ọsọ.
Na nnukwu ọsọ, ibu dị oke ma ọ bụ naanị servos kachasị mma na njikwa dịpụrụ adịpụ ka arụnyere iji nwee ike ijikwa ndị na-enweghị ihe ndọghachi azụ n'ụzọ zuru oke site na njikọ redio dị mma n'oge niile. Ndị agha torsional dị elu na-eguzogide (na-agbagọ) na nku nwere mmetụta dị ukwuu na-ewu na nnukwu ọsọ ndị a. Ntinye ntinye ọzọ na nke siri ike, nke ọma ma ọ bụ nke na-adịghị mma, etinyebeghị igwe ndị ahụ n'ihe egwu nke imebi n'ihi na ezubere ha ka ha wee kwụsie ike na nhazi ha. Kaosinadị, ụdị ndị a abụghị "zuru trotul" ma n'ihi na enweghị ndị a na-akpọ "zuru trotul" ụdị.
Ndị na-anya ụgbọ elu abịarutela usoro ndị a kemgbe ọtụtụ afọ ma nwee ike inwe nnukwu ntụkwasị obi na nrụpụta ndị a. Ndị G-sensọ nke telemetry enweghị ike ịlele etu ihe dị elu maka ụfọdụ ọnụ ọgụgụ siri ike, n'ihi na ezubere ha maka nke a ma kwụsịkwa.
OZI OZI GROUP MFG PORZ Mfe GLIDER, KWES ,R M, MENTE, SHARK PORZER AIRSHOW & JET'S COLOGNE
Gbọ elu ahụ mere na Tannenalm na Tyrol https://tannenalm.at
Tags 4KDaniel Leskyụgbọ elu ikuku na-achịkwaNa Na NaJupụtaMessenModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuijeụkwụPacetreffenRCụgbọ elu rcrc nlereanyaọsọTannenalmreviewsTOP PACETOPACEihe